Kimboo Balfaa Yoo Warshaa Waa Jijjiirutti (Recycling) Naqanii Jijjiiruuf Yaalaniis Kimbuma Balfaatu Bifa Jijjiiratee Gadi Baha Malee Qabbiyye Biraa Ta’uu Hin Danda’u -
Badhoo Nagawoo Garasuu irraa
Mootummaan farra ummata Oromoo faashistoota “Wayyaanee/EPRDF”, ummata Oromoo fi FXG Qeerroo Oromoon adeemsifamuun (adeemsifamaa turee fi ammas itti jiruun) ol aantummaan isaa bakka duraanii irraa siqee du’aa fi jireenya gidduutti rarra’ee argama. Sirni murna kanaan diriirfame siyaasaan injifatamuu irraa har’a akka duraanii kijibuu, sossobbii fi gowwoomsaan jiraatuun kan hin danda’amne akka tahee sochiin ummatootaa Impaayera kana keessaa addatti ammoo sochiin ummata Oromoo hubachiisee jira.
Mootummaanfaashistoota EPDRF muddamsuu keessa seenee jiru kun kasaaraan siyaasaa isa mudatullee ammayyuu bittaa isaa dheereffatuuf malaa fi shira adda addaatti fayyadamee aangoo irra of tursuuf hojjatuu irratti argama. Maloota ittiin gargaaramuuf lafa keeyate keessaa tokko kanneen Oromoo keessaa madaqfatuun amanamoo taasifate of dura qabuun ummata Oromoo qabsoo irraa maqsuu/dagachiisuun/ yeroo bitatuu dhaan deebisanii of jabeessuu kan jedhu waloon karoorfatanii maqaa haaroomsa jedhuun bobba’a jiru. Dhaabootin maqaa EPDRF biiyya bulchaa turan afranuu saboota “isaanii” gowoomsuuf qajeelfama tokkoo fi jechoota wal fakkaatoo fi ilaalcha tokkon bobba’aa jiru. Ragaa haala kana “ murtii mana marii eegumsaa nagaa”faashistoota EPDRF qofa dubbisuun gahaa dhan jedha.
Labsiin hatattamaa kan” murtii mana marii eegumsa nagaa” faashistoota TPLF/EPRDF kunis guyyaa 20/03/2010 irraa kaasee hojiirra oola jedhame kunis kan mirga saba Oromoo guutuuti ugguruu irratti xiyyeefatee ta’uu isaa qabbiyyeen labsichaa barruu gabaa walgahii “mana marii eegumsa nagaa” kan icciittiin isaa jalaa bahe (leaked out minute of the meeting – document) irraa hubatameetti jira. Barbaachiisaa taanaan kan afaan Amharaatiin maxxanfame waan saraara irra jiruuf barbaadanii dubbisuun kan abbaa raga barbaaduuti ta’a.
Ummatni Oromoo OPDO Wayyaaneen addatti ilaalee hin beeku. Isaan illeen addatti of ilaalanii hin beekan. Dhaaba tokko EPDRF kan” sirna waaltummaa dimokiraasiin bulaa jiru” waan ta’eef. Ummataaf hafnaan ofiifuu kan hin taane mirga dhablee tahuutti beeka. Saba Oromoo keessaa kan gabrummaa haalaan cimaa keessa jirus miseensota OPDO ta’u isaanii sabni Oromoo tolcheeti beeka. Warra hidhamuu fi hidhuun ala nama tokko illee mana hidhaa gooftolii isaanii keessaa baasuus akka hin dandeenye ummatni Oromoo tolcheeti beeka. Kana irraa ka’uun ummatni Oromoo waggoota bittaa Wayyaanee keessatti dabarse guutuutti deggersa isaa dhowwatuun har’a gahe. Kana cabsuun ummata Oromoo hawwatuuf jaarmayaan kitillayyoonii kun dhaadannoo fi jechoota ABO butatuun dogoggorsuu (confusion) uumuu fi “warraaqaxoota” of fakkeesuuf afaan-faajjii waliirra hin citne gochaa jiran.
“Tokkummaa, bilisummaa, qabsoo, warraaqsa diinagdee, afaan Oromoo afaan biyyaa haa ta’uu, Finfinnee keessatti afaan Oromoo afaan barnootaa fi hojii haa ta’uu, wareegamtoota qabsoo irratti wareegaman haa yaadanuu, diina keenya ni injifannaa, galii keenya ni geenyaa, karaa qaxxaamuraa irra jira, tasgabii fi nagaa feena fi …. kkf” jechuun waadaa fi dhaadannoo kijibaa tarrisuun ummata hawwatuuf olii fi gad figaa jiru. Gama maayyii kana ammoo warra nagaa booreesu adamsinaa nu gargaaraa jechuun ummata walgahiin dararaa jiru. Kun hundi mootummaa isaanii kan faashistoota TPLF kufaatii irraa oolchuuf ta’uun daguun kan ilaalu fayyaallessa galii qabsoo bilisummaa Oromoo hin beekne qofa. Gochaan hojiin laffarratti mul’atuus dhaadannoon OPDO dhaadannoo EPRDF ta’u kan mirkaneessu, Boorana-Moyyaalee, Gujii, baha Oromiyaa, lixa Wallagaa Dambi Dolloo fi Giddu gala Oromiyaa keessatti waan hojjataa jiran wal gaafachuu nu hin barbaachiisu. Dhaadannoo dilaa fi qullaa kan bishaanitti naquus dhugaa lafarra jiru kana goota lubbuun jiru ajjeessanii kan du’eef ammoo wareegamtoota keenya jedhanii mataa lafatti awwaaluun ‘yaadannoo jechaa ooluun gatii hin qabu. Mataa Nazi Paartii Jarmanii kan ture Hitler field Marshal Romeeliin dhoksaan ajjeesee awwaalcha isaa irratti ammo argamee boyyicha sobaa booyuu isaa seenaan raga baha. Faashistootni TPLF shira kanaan beekamoo dha. Qabsaawwotni Oromoo fi ummatni Oromoo shira kanaan kan gowoomu miti hubachuu qaban ture jarreen keenya kun. Warreen Jaagamaa Badhaanee fi Daraaraa Kafanii akka ajjeeffaman murteesse har’a Magaalaa Amboo dhaqee yeroo “nagaa fi tasgabii” jedhee booyu hin dinqisiifadhu.
Haa ta’uu malee galiin“ qabsoo bilisummaa “isaan jedhan kun maal akka ta’ee osoo ummataaf hin himne qabsoo keenya jechaa oolanii buluun hojii isaanii ta’eeti jira. Waggaa 26 dura yeroo aangootti ol bahan ummatni Oromoo bilisomeeti jira jechuun ABO fi dhaaboota Oromoo kanneen bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa argamsiisuuf falmaa turanii fi ammas jiran mara” farrummaa” biyyaatiin farajuun qabsaawoota kana ajjeesaa fi mana hidhaatti guuraa har’a gahan. Bilisummaan Oromoo isaan har’a warruma kalessa akkas jedhaniin ilmaan Oromoo irratti yakka hojjataa turaniin har’a ammoo ittiin dhaadatamu kun hoo har’a galiin isaa maalii kan jedhuuf deebbii kennuu danda’uu laata? Baroota 27f hoo jarreen kun eessa turan? Gabroomsaan hara’a OPDOn argame kun enyuu jechuuf yaalan dhiiroo? EPRDF eega biyya bara 27f bulchee OPDOn essa turteetii hardha bilisummaa fi warraaqsa diinagdee kan jettu? Waan biroon hafnaan dhaabni Oromoo kamuu kan faashistoota TPLF jalatti hidhannoo ummata Oromoo hikachiisuu, kan dhimma Oromummaa fi dhimma Oromiyaa gantumaan faalleesuu ta’uun hubatamuu dha qaba. Oromoo hidhannoo hikkachiisanii enyuun humneessuuf Oromoon kan Oromoo hidhannoo hikkachiisu. Sirna Gadaa keessatti Oromoon saba guddicha dhiisii Oromoo dhuunfaa tokko hidhannoo irraa fudhatee yokkaan hiikkachiise du’aan adabama ture. Hardha hoo yeroo ‘hundi tokkoof, tokkos hundaaf “ jennee sabboonummaan Oromoo bilchaate jennu akkammitti dhaabni OPDO ummata Oromoo hidhannoo hiikkachiisuuf labsii jeneraalotni TPLF aangoo isaanii kufaatii irraa hambisuuf labsan hojiirra oolchuuf ifaajjii godhuu irratti walta’uun Oromiyaa command post waraana diinaa jala galchan?
Dhaadannoon baroota 1991 ” duula Bilisummaa fi walqixummaan” yeroo aangooti ol bahan ittiin dhaadatanii turan hojiirra olchuun hafnaan, enyuutuu ummatni Oromoo gadi bahee nagaan galuu isa dhowwaa turee fi jiraas maaf deebbii ummatichaaf kennuun ulfaataa isaanitti ta’ee? Kan baroota 27 dhiisnee bara 2014 irraa kaasee hanga hara’atti Oromoota 11,000 ol kan gara jabina daangaa hin qabneen mootummaa isaan kufaatii irraa hambisuuf ifaajjii godhaa jiran kanaan Oromoota ajjeeffaman enyutu itti gaafatamaa? Yakka kanas kan raawate mootummaa EPRDF ta’uun isaa shakkii malee hanga ta’eetti OPDn akka dhaabaatti (as an institution) maaltuu itti gaafatama kana jalaa ishii baasaa? OPDO mootummaa EPDRF keessaa abjuun bahanii guyyaan ammoo ummata Oromootiif himuu sodaatanii laata? Moo Saba Oromootu hanga kana gowwaa fi fayyaallessa jedhameeti yaadame laata? Hogannootni OFC Kabajamoo obboo Baqqalaa Garbaa, Dr. Maraaraa Guddinaa, obbo Dajane Xaafaa, Ulbaanaa Leellisaa fi hidhamtootni siyaasaa Oromoo kanneen kumoota kudhaniin lakkaawwaman osoo mana hidhaatti imaammata mootummaa EPDRFn Oromummaa isaanii qofaan gidirfamaa jiranuu “tokkummaan Oromoo” OPDOn afarsituu kunii hoo maal jechuudha laata?Dhaadannoolee ummata gowwomsuuf dadarbataamaa jiru hedduu isaa kakaasuun jecha qullaa ta’uu isaa fi jechoota diinaa fi fira isaa adda hin baafatinii fi galiin (goal) isaas ummataaf hin himamin qullumaa isaa tokko tokkoon xiinxaluun ummata gowwoomsuu qofaaf kan darbatamaa jiru ta’uun agarsiisuun ni danda’ama. Kana hubannoota ummatichaaf kabajaa waanin qabuuf ummata Oromootiif dhiisuun barbaada.
Sadarkaa duraatti jechoota warraaqsaa daddarbatuu fi waadaa kijibaa akka seenu kan taasise, akkasumas tarkaanfiilee xixiqqoo akka fudhatu kan fuunyaan qabee dirqisiise wareegama waggoota 25 ABOn baasee Wayyaanee diigaa dhufee fi qabsoo ummata keenyaa goota kanaa tahuun dagatamuu hin qabu. Wayyaaneen akka OPDO akka dhageeffatu kan taasise FXG Qeerroo Bilisummaa Oromoo ABOn ijaarameen hogganamuu ilmaan Oromoo irratti wareegamaa jiranii dha malee waan birootii miti. Isaanuu yoo ABOn jabaate OPDOn TPLF biratti kabajaa fi dhageetti argana jechaa turuun waan nuttis beeknuu fi isaaniis dubbataa turanii dha.
Gam tokkoon ummata Oromoof dhimmaa fakkaatanii lallabaa gama kaaniin ammoo diina waliin hiriiruun falmaa mirga isaatiif adeemsisu kolaasuuf ilmaan Oromoo hidhaatti guuraa jiraatuu fi shiraa akka jiran murtiin Jeneraalota wayyaanee waliin taa’uun dabarsan ragaa qabatamaa dha. Murtii Mana Maree Eegumsa Nagaa Biyyoolessaa (National Security Council) heeraa isaanii irra ejjetuun dabarsan baatii kana 20-03-2010 oolu kanaan Oromiyaa dhuunfachuuf deebisanii bulchiinsa waraanaa jala galchanii jiran.
Murtiin mana marii eegumsa nagaaa faashistoota EPDRF kunii hoo galiin isaa maalii :
Mormitoota hidhannoon mootummaa faashistoota EPDRF
mormanii fi dhuunfaan ummaticha hidhannoo qaban hiikachiisuu- kan kallattiin galee gabaasaa walgahii kan murtii mana marii nagaa irratti tuqame ABO fi G-7.
Naannoo mormitootni hidhannoon sochaa jiran dhuunfachuu fi duula ofiin itti duulutti dabalee mootummoota ollaa daboo kadhatuun irratti duuluu
Bakkoota tarsimoo tahan qubatanii humnootni garii akka biyya hin seene ittisuu fi kanneen biyya keessa sochaniis ulaa itti cufuun sochii dhorkuu
Diinni ummata keenyaa kun maqaa ABO fi alaabaa ABO arguu fi dhaga’uu hin barbaadu. Kanaafis kan alaabaa qabatee hiriira bahu irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhatuu irraa of booda hin jedhu. Labsa jalaa miliqee bahee irrattis tarkaanfii laalessaa akka fudhatuuf jiraatu karoorfatee jira. Kana dura baroota ( 2014,2015,2016 fi 2017) mootummaan faashistoota TPLF alabaa ABO kan ummata Oromootiin jaallatamuu fi kan ummatichi alabaa Oromiyaa jedhee fudhatee ittiin dhaadatu busheesuuf tika isaatiif hiree badii Oromoon takkaa itti hin yaadnee ittiin hojjatee sochii ummata Oromoo maqaa balleessuuf yaalu illee itti duroomuu fi itti milkaawuu hin dandeenye. Hang amma illee dhaadatu ammas itti milkaawuu hin danda’u.
. Kanuma waliin hiriirri waliigala dhorkamuun Oromoon hiriira nagaan akka mirga isaa hin gaafatnee fi mirga dimokirasii jiran jedhanii ittiin dhaadatan xiqqaa sanuu isatti cufuuf akka tahe ifaa dha. Kun ammoo filmaatni falamaa mirga keetiif qabdu Fincilaa fi qabsoo hidhannoo qofa jedhanii dirqisiisuu tahuun ifaa dha.
Alaabaa ABO kan ilmaan Oromoo qaqqaalii fi ummatni Oromoo guutumatti alaabaa diddaa gabrummaa impaayerummaa Itoophiyaa ta’u isaa fudhatee irratti dhumaa jiru namni qabatee bahu haa ajjeeffamu jedhanii murteessuun , murtii kanaa fi kanneen gubbaa irraa hanga tokko tuttuqe hojiirra akka prezeedantiin NBO Oromiyaa fi Comand post Oromiyaa irratti ramadame guyyaa 20-03-2010 irraa kaasee hojiira akka oolu bulchiinsi Obbo Lammaa fi gareen isaa maqaa dhaaba Oromoo qabu dirqama kana ofitti fudhathuun karoora labsa hatattamaa kana 16-03-2010 irratti mirkaneessee fi karoorfatee hojiira oolchuuf qophii ta’uu isaa ‘muummicha Ministeraa”Hailemariam Dasalenyiif mirkanneesuun dhaadannoon OPDO imimmaan Naachaa ta’uu Oromoof ifa godhe jira.
Ummata Oromoo irrattis tarkaanfii fudhatuuf murteeffatan. Murtiilee dabarfaman kanneen jabinaa fi murannoon dura dhaabbatuun fashalsuu irratti hojjatuun gaaffii yeroo kan ummata Oromoo tahee jira. Tarkaanfii toofta bilchaata hordofanii wareegama xiqqeessaa socho’uu hanqatuun fi riphuun gaaga’aa akka tahe qabsaawootni, sabboontonnii fi ummatni Oromoo bal’aa beekuu qaban. Kanaaf Diddaa wareegama ulfaataa hin gaaftne bifa dhaabbataan itti fufuun gabrummaa raafamee jiru kana xumura itti gochuun dirqii taha.
Diinni kufaatiin isaa itti dhihaatte har’a bulinnaaf tooftaan itti gargaaramu kan biraa humna isaa bakkoota qabsoon itti jabaateetti WBO fakkeessuun bosonatti galchee ummata afaan fajjeessuu dha. Kanaaf ummatni keenya Qeerroon qabsoo bilisummaa quunnamtii humna hidhatee kamuu waliin godhan osoo adda hin baafannee quunnamuu diduun gaaga’ama xiqqeessa. Akeekni humna tika faashistoota Wayyaanee alaaba ABO qabatee maqaa WBOn sosso’uu ilmaan Oromoo akka itti baqatan gochuun qabatuuf, dukkanaan dahatee deggeraa dhaabaa adda baafatuun rukutuu kan akeekkate waan taheef hubanootaan alatti quunnamtii kamuu irraa of qusatuun akeeka diinaa doomsa jedheen amana. Kanaaf humanas tahe murna maqaa WBOn sosso’u yoo naannootti argame ykn dhaga’ame ummatni keenyaa fi Qeerroon bilisummaa Oromoo eenyummaa humna sanaa baruuf hubannoota isaan gargaaru ni qabaatuu jedheen herregga
Qabsoon bilisummaa saba Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf gaggeeffamaa jiru haala ulfaataa fi wal xaxaa adda addaa keessa bahuun arma gahe humni kamuu ukkaamsuu akka hin dandeenye ifaa dha. Duula karaa hundaan saba Oromoo irratti baname kana irra aanuuf har’as akkuma kaleessaa tokkummaa keenya jabeeffataa, murannoo keenya cimsataa haa warraaqnu. Qabsoo ummataa humnaan ukkaamsuu kaleessa dadhabame kanneen har’a imimmaan Naachaa booyaa dhaamsuuf wacaa jiran kanneen seenaa irraa hin baranne qofaa dha. Kan injifatu qawwee osoo hin taane ummata haqa isaaf dhaabbate dha. Ummatni Oromoos kan qabsaawee fi qabsaawaafis jiru bilisummaa saba Oromootii fi walabummaa Oromiyaatiif malee akka warrootni isa saamiinsa alagaatiif isa saaxiilan jedhaniiti gaafiin isaa gaafii dabboo qamadii yookaan biddeena xaafii dhabuu akka hin taane qabsoon agarsiisaa jira.Ummatni oromoo bara 27f nu dhagahaa jechuuf hiriira bahe hidhamaa fi ajjeeffamaa turuu fi kan ittis jiruudha. Garagaltii miilatu mataa hooqaan dhufee as kaluu kana ammo warruma isa hidhaa fi ajjeessaa fi ajjeesiisaa turanii fi ittis jiraniituu ‘wal haa dhaggeenyuun” qilleensa Oromiyaa fi gurra ummata Oromoo duuchaa jiran. Baroota dheeraa kanaaf maaf ummatni Oromoo dhagahamuun diddamee amma isaan dhagahaan gaafii isaanumtii qofti deebbisuu qabaniidha moo kan ummatni Oromoo deebbiisuu qabuudhaa? Abbootin Irree yeroo yeroon isaanii gahe yaaca’uu guddatuun suni dhugaa ta’uudha nu agarsiisaa jiru. Galiin isaanii aangoorra turuudha. Kanaaf sagalee ummataa dhagahuu diddan ummataan keenya dhagahaa jechaa jiru. Sagalee enyutuu dhagahamuu qabaa fi sagalee enyuutuu murteessaa dhaa seenaa qabsootifi dhiisna. Kan seenaa ofii tolfatu saba bala’aa ta’uu isaa warri hin beekne seenaa irraas barachuuf hin taa’aniin dhugaadha.
Galiin qabsoo Oromootis-bilisummaa saba Oromoo fi walabummaa Oromiyaa waan ta’eef- sabni Oromoo gootummaan beekamu kun qabsoon of bilisoomsas. Biyya isaa Oromiyaas ni walaboomsa.
Qabsoon OPDOn eega diinaan bixxilamtee akka dhaabaatti ( institution) gootee fi godhaan jira jettu faallaa fedha biyyoollesummaa ummata Oromoo (Oromo nation’s national aspiration) ta’uu Oromoo maraaf ifaa dha. Baroota 27f dantaa alagaati hojiirra oolchuuf hojjachaa bahan malee dantaa fi dhimma ummata Oromoo irratti akka hojjataa hin turiin isaannu kan maman ta’aa hin jiru. Ilmaan Oromoo dhuunfaan OPDO keessaa fedha ummata Oromoo qomaa qalbiitti fudhatanii hiree argame hundatti dhimma bahanii ummata oromoo waliin dhaabataa jiran nin dinqisiifadha. Guyyaa, saba sanyii duguugaa Oromoo irratti adeemaa jiru gayye yaadaa fi ilaalchaa godhachuun OPDOn akka dhaabaatti miseensummaa EPDRF keessaa of baastee, qabsoo ummata Oromoo waliin dhaabachuu murteeffate dhimma OPDO hangan irra deebbi’ee ilaalu ammaaf OPDOn tumsi ishii Oromoof osoo hin taanee tumsa faashistoota TPLFf heeraa fi seeraan dhaabbate ala waaniin jedhu hin jiru. EPDRF keessa kan jirtuufis kannumaaf. Mootummaa yakkamaa kanas kufaatii irraa oolchuun gonkumaahu kan hin danda’amne ta’uu beeku qabu.